DAAWADDA : SHILINKA QIIMO-JABAY IYO SICIR BARARKA SHILINKA QIIMO-JABAY | Lughaya.Com
DAAWADDA : SHILINKA QIIMO-JABAY IYO SICIR BARARKA SHILINKA QIIMO-JABAY
Dawladda JSL faraha ha kala baxdo sarrifka iyo sarriflayaasha. Waa suuq xor ah ee ha loo daayo awoodda suuqa xukunta (Market forces of Demand and Supply – العرض والطلب ). Midda labaad, talada ha loo dhiibo khobaro iyo wax aqoon. Maasha ha ka baxaan dadkan aan lahayn khibrad bank amma tu dhaqaale (amateurs) ee ka talinayaa sicir-bararka iyo qiimaha Shilinka JSL.
Somaliland 4 nooc oo raashinka daruuriga ah ayay dabadda ka soo waariddaa – Bariis, Sonkor, Daqiiq, iyo Saliid. Sicir-bararka raashinka waxa lagu xakamayn kara waxa loo yaqaan (price Tag – Amma kaadhka sicirka ) . Price Tag waa farsamo la tijaabiyay oo dhul badan sicir-bararka lagu xakameeyay. Tusaale: Taajirka bariiska soo waarida waa in lagu khasbo inuu jawaanaka ku qoro sicirkaa ugu badan ee qofka lagaga iibin karo. Jawaanka bariiska taajirka soo waaridaa wuxuu ku dhajinayaa kaadh sheegaya 50 Dollar oo ah sicirka aan wax ka badan lagu iibin Karin. Sida awgeed, taajirka isaga ayay u taallaa waxuu jawaanka kaga iibiyo TAAJIRKA DHEXE (45, 48 dollar). Waxaase xaaraan iyo mamnuuc ah in qof SL ku nool jawaankaa laga siiyo wax ka badan 50 dollar. Tal labaad:
waxaa iyana reebban in Kaadhka Sicirka lagu qoro amma laga dhigo SL shilin. Sababtoo ah SL shilinku ma fadhiyom , halka Dollar yahay lacagta dabadda wax lagaga soo waarido. Mid kalena waa waajib: Qofka Jawaanka bariiska ah iibsanaya waa in laga qaado SL Shilin amma dollar kolba kuu isagu doorto. Sabab: Haddii la yidhaa jawaanka bariiska eek u qiimaysnaa 50 dallar, khassab SL shilin ha loogu iibiyo: waxa dhici doonta, in taajirku yidhaa: Jawaanka bariiska ah waxaan siinayaa 500,000 shilling iydoo sarrifku marayo 8,000 (500,000/8000 = 62.5 dollar) , iydoo run ahaaan jawaanku qiimahii yahay 400,000 Shin ( 50×8,000) . Sida darted qofku xoriyadda ha loo daayo. Marwalba ha la hubiyo inaan jawaanka lagu iibinkarin wax ka badan 50kii Dollar ee lagu dul qoray meel kasta oo Somaliland ka mid ah. Qofka sicirkaa lagu heshiiyay wax ku kordhyana waa in sharciga la margo .